Indlu yamaplanga esemaphandleni enesitovu seenkuni eHighland ebiyelweyo - I-Airbnb
Indlu yamaplanga esemaphandleni enesitovu seenkuni eHighland ebiyelweyo
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguTim And Judy
UTim And Judy yi-Superhost
I-The bothy yindlu yamaplanga ezimeleyo esecaleni kwehlathi lethu eWest Cottage and Stables, ekwindawo ephakathi eGlen Lyon nasekuqaleni kweendawo ezininzi ezintle zokuhamba ngeenyawo nokukhwela umjikelezo. Kukho ibhedi elala abantu ababini, ibhedi eyongezelelekileyo, igumbi lokuhlambela elikumgangatho ophezulu nesitovu seenkuni. Kukho i-hob, ifriji, nayo yonke into oyidingayo ukuze upheke, kodwa akukhooveni. Singakufakela into ethile kwi-oveni ukuba uyasifuna.
Yindlu yamaplanga enamagumbi amabini antofontofo elungiselelwe ukuziphakela kwigumbi leshawa elikumgangatho ophezulu kunye nendlu yangasese. Kukho isitovu seenkuni esinobushushu nendawo encinci yekhitshi. Umgangatho ngamatye kwaye iindonga ngamaplanga. Kukho ibhedi nesofa ekwayibhedi etofotofo yabantwana okanye ukuba ungathanda ukuba neebhedi ezimbini.
4.94 · Izimvo eziyi-337
Singqongwe kakhulu yile ndawo, singqongwe ziintaba. Uza kubona ii-squirrels ezibomvu, ii-deer, iintaka ezininzi, ii-hedgehogs. Umjelo uhamba ecaleni kwendlu ibe ukuba kushushu ungacwilisa. Jonga kwi-PH15 2nger kwi-G. Earth kwaye uza kubona ukuba sithetha ukuthini. Ukusuka kwi-Olly unamahlathi kwelinye icala, jonga i-Glen ukuya empuma kwelinye icala. Ngena entwasahlobo uze wonwabele ii-bluebells neentaka zabantwana. Okanye ihlobo, ukuqubha kwi-Invervar Burn kunye ne-drone yeenyosi. Okanye ekwindla, amakhowa asendle kunye nemibala yemithi yonke phantsi kweGlen. Okanye ebusika, xa uhamba ngekhephu nemililo emfumamfuma, mhlawumbi utyibilike...
Umbuki zindwendwe ngu- Tim And Judy
Siza kube silapha ukuze sikuncede nanini na usifuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Aberfeldy